Xog: Miisaaniyadda hor taala Baarlamaanka ee loo qoondeeyay Dawlad Goboleedyadda xageey ka imaanaysaa,? – Hornafrik Media Network
Xog: Miisaaniyadda hor taala Baarlamaanka ee loo qoondeeyay Dawlad Goboleedyadda xageey ka imaanaysaa,?
By HornAfrik	 On Jul 17, 2017
tan iyo markii la hor geeyay Baarlamaanka Somalia Miisaaniyadda 2017 ee ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyadda waxay dood xooggan ka dhalatay Qoondada Dawlad Goboleedyadda oo la dhaliilay inaysan isku mid ahayn, isla markaana Maamuladda qaar loo sameeyay Sad Bursi.
Hornafrik waxay dabagal ku samaysay Dhaqaalahan loo qoondeeyay Dawlad Goboleedyadda iyo sida uu ku yimid.
Puntland iyo Jubba Land
Miisaaniyadda u qoran Maamuladda Puntland iyo Jubba Land ma ahan mid hadda billow ah ee waa Dhaqaale ay horay u qaadan jireen, mana ahan Qarash ka baxa Qasnadda Dawladda Somalia ee waxaa bixiya IMF iyo Bank ga Adduunka. Waxaana Dawlad Goboleedyadan ay horay u buuxiyeen Shuruudihii looga baahnaa, taasoo keentay in Sannadkii hore Bankiga Adduunka uu aqbalo Codsigooda, loona billaabo Lacagta hadda ugu qoran Miisaaniyadda ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyadda.
Wasiirka Maaliyadda oo Miisaaniyadda ka hor akhriyay Baarlamaanka waxa muuqata inuusanba ogayn halka ay Lacagtan ka imaanayso, Waxaana Baarlamaanka uu hortagay isagoo aan fikir ka haysan waxa uu la hor tagayo oo ay soo diyaariyeen Khuburo Wasaaradda Maaliyadda ka tirsan oo gacan ka helaya Bankiga Adduunka, taasina waxay keentay in dood badan uu ka dhex dhasho Baarlamaanka Somalia.
Bankiga Adduunka iyo IMF waxay siiyaan Somalia Dhaqaale, taas oo Maamuladda soo buuxiya Shuruudaha, isla markaana sameeya Xisaab Celin loo joogteeyo. Waxaana Shuruudahan horay u buuxiyay Dawlad Goboleedyadda Puntland iyo Jubba Land. iyadoona hadda ay socoto hawshoodu Maamuladda Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo codsaday in iyana Dhaqaale kabid ah uu siiyo Bankiga Adduunka.
Maamuladda wax laga siiyo Qasnadda Dawladda.
Maamuladda Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle waa 3-da Maamul ee kaliya si joogto ah Dhaqaale looga siiyo Qasnadda Dawladda Somalia. Waxaana Dhaqaalahan oo Bil walba la siiyo Maamuladdan ay si toos ah uga baxaan Qasnadda Bankiga Dhexe ee Somalia, hase yeeshee ma jiro Dhaqaale toos ah oo ay Dawladdu siiso Maamuladda Punt Land iyo Jubba Land.
Xog: Xageey Alshabaab ku diyaariyaan Qaraxyadda ay ka gaystaan Muqdisho,?
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dhowaan la wareegeyso furaha dalka ee 252